Badhasaabka Awdal Oo Masuuliyiinta Gabiley Ku Eedeeyey Sheegashada Iyo Ka Hadalka Qaybo Ka Mid Ah Xuduudda Labada Gobol U Dhaxeeya, Sheegayna In Ay Tahay Salaad Aan Wakhtigeedii Joogin | FooreNews
Home wararka Badhasaabka Awdal Oo Masuuliyiinta Gabiley Ku Eedeeyey Sheegashada Iyo Ka Hadalka Qaybo Ka Mid Ah Xuduudda Labada Gobol U Dhaxeeya, Sheegayna In Ay Tahay Salaad Aan Wakhtigeedii Joogin
Badhasaabka Awdal Oo Masuuliyiinta Gabiley Ku Eedeeyey Sheegashada Iyo Ka Hadalka Qaybo Ka Mid Ah Xuduudda Labada Gobol U Dhaxeeya, Sheegayna In Ay Tahay Salaad Aan Wakhtigeedii Joogin
“Xuduudda Gobolada Awdal Iyo Gabiley Waa Tii Ingiriisku Dhigay Waxaana Wax Ka Badali Kara Oo Kali Ah Xukuumadda Dhexe”
Boorama (Foore)- Badhasaabka gobolka Awdal Axmed Xaddi Sidci ayaa Maamulka gobolka Gabiley ku eedeeyey in ay ka hadleen sheegasho dhul iyo arrimo la xidhiidha xudduudda labada gobol wakhti lagu jiro ka hadalka mashaqadii ka dhacday deegaanka Seemaal. Badhasaabka Gobolka Awdal oo shalay warbaahinta kula hadlayay magaalada Boorama ayaa maayarka iyo badhasaabka Gabiley ku eedeeyey in ay ka hadleen xaalad aan loo joogin wakhtigeediina la taagnayn kadib markii ay soo hadal qaadeen xuduudda labada gobol u dhaxaysa oo ay sheegteen goobo aanu carrabaabin halka ay yihiin.
Badhasaabka oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Waxa wax laga xishoodo ah in maamulka gobolka Gabiley ay ka hadlaan sheegasho dhul iyo xuduudo. Xuduudda labada gobol ee Awdal iyo Gabiley hadii aanay xusuusnayn waxaan u caddaynayaa in xuduudaasi tahay tii uu Ingiriisku ka tagay, wax ka badalkeeda iyo xaqiijinteedana ay tahay mid u taalla xukuumadda dhexe, ee madaxweyne leh ee madaxweyne-xigeen leh ee gaar ahaan leh wasiirka daakhiliga leh”.
Badhasaabka gobolka Awdal Axmed Xaddi Sidci oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Xaqiijinta xuduudaha u dhaxeeya gobolada Awdal iyo Gabiley, waxaan u sheegayaa oo aan xasuusinayaa maamulka gobolka Gabiley in aanay xuduudahaasi ahayn mid kolba maamulka gobolka yimaadaa aanu sid auu doono u riixi karo, ma aha mid loo riix riixi karo sidii madaha beeraha oo kale”.
Badhasaabka gobolka Awdal waxa uu masuuliyiinta gobolka Gabiley farriin ugu diray in ka hadalka xuduudaha labada gobol ee Awdal iyo Gabiley aanay ahayn mid laga hadli karo wakhtigan isaga oo ugu maahmaahay in wakhti walab salaadeeda la tukado. Isaga oo badhasaabkau arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: “Arrintaasi waxaan filayaa in ay tahay mid aan joogin, salaad aan joogin wakhtigeedii in la tukado”.
Badhasaabka Gobolka Awdal Md. Axmed Xaddi Sidci waxa uu masuuliyiinta gobolka Gabiley ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadaynta iyo sidii loo damin lahaa xaaladda ka dhalatay dilkii foosha xumaa ee lagu khaarajiyay saddexda nin, kana shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa cid kasta oo ka dambaysay dilkaasi. “Waxaan leeyahay maamulka gobolka Gabiley oo aan kula talinayaa in ay ka shaqeeyaan nabadda, inay ka shaqeeyaan soo qabashada gacan ku dhiig-layaashii falka foosha xun leh riday oo ay gacan ka gaystaan soo qabashadooda.
Uma fadhino maanta in ay ka hadlaan deegaan gobol ka tirsan iyo deegaan gobol kale ka tirsan, intaasaan u dirayaa” Ayuu yidhi Maxamuud Cabdi Sidci .
Ugu dambayn badhasaabku waxa uu tacsi u diray dhammaan shacabka reer Somaliland iyo ehelkii ay marxuumadaasi ka baxeen.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Md. Maxamed Nuur Carreele Duur ayaa ka hadlay waxyaabaha sababta u noqda inya badna ee dhaliya nabad gelyo darrada Somaliland. Wasiirku wax auu sheegay in ay laba qodob oo muhiim ahi inta badan dhaliyaan bad gelyo darro iyo isku dhac dhiamsho keena, kuwaasi oo kala ah dilka aanada ah ee qabiilak salka ku haya iyo dibaatooyinka dhulka. Wasiirku wax auu.
Mudaharaad Rabshado Wata Oo Xalay Saameeyey Magaalada Boorama
Boorama (Foore)- Mudaharaad rabshado wata ayaa xalay si kedis ah mar kali ah abbaaro sagaalkii iyo dheeraad cawaysnimo uga bilaabmay badhtamaha magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal kadib markii kooxo dhallinyaro ah oo gadoodsani socod ku mareen mid ka mid ah waddooyinka magaaladaasi. Mudaharaadkan oo markii hore koobnaa ayaa markii dambe isu rogay muharaad ballaadhan oo rabshado wata oo ay foodda isku dareen booliska iyo kooxahan mudaharaadka dhigayay oo u badnaa kooxo dhallinyaro ah.
Wariyahayaga gobolada Awdal iyo Selel Mustafe Sheekh Aadan oo mudaharaadkan u kuur galay ayaa noo sheegay in mudaharaadkani ka dhashay warar aan la xaqiijin oo sheegayay in xalay fiidkii ciidamada Boolisku xidheen qaar ka mid ah madax dhaqameedka Boorama, taasi oo keentay in ay dhallinyaro xadhigaasi ka gadoodsani shaaracyada isugu soo baxeen abbaaro sagaalkii fiidnimo ee xalay. “Kooxo dhallinyaro ah oo mudaharaad dhigaya ayaa soo maray wadada wadnaha ee magaalada Boorama iyaga oo ku qaylinayay ereyo ka dhan ah maamulka gobolka iyo guud ahaan xukuumadda, kadibna waxa mudaharaadkaasi isku dayay in ay joojiyaan booliska magaalada, kadibna rasaas googoos ah oo mudaharaadayaasha lagu kala dareerinayay ayaa bilaabantay. Wakhtigan waxaan ku suganahay gurigayga waxaanan maqlayaa rasaaska dhacaysa” sidaa waxa yidhi mid ka mid ah dadka degan magaalada Boorama oo aanu khadka taleefanka kula xidhiidhnay.
Mar aanu isku daynay in aanu mudaharaadkan iyo sida uu u saameeyey ammaanka magaalada wax ka waydiino masuuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ayaanay noo suurta galin. Ilaa imika lama oga saamaynta uu mudaharaadkaasi ku yeeshay xaaladda guud ee magaalada iyo waxyeelada uu keenay. Maadaama ay ahayd goor dambe oo habeenimo ayay adkayd in halkaasi laga helo warar faahfaahsan oo arrintan la xidhiidha.
Previous PostGuddida Horumarinta Galbeedka Iyo Woqooyiga Gabiley Oo Cambaareeyey Falkii Saameel Next PostAgaasimaha Warfaafinta Oo La Kulmay Sarkaal Ka Socday Dawladda Masar